पशुपतिलाई ३५ करोड छुट्याउनु एकल जातिय संकीर्ण सोचको पराकाष्ठा - Pardeshi Khabar
भगवान चाम्लिङ, केन्द्रीय सदस्य, जसपा
हिन्दु मन्दिरलाई करोडौ बजेट छुटाउने र आदिवासीहरुको धरोहर खुवालुङ ध्वस्त बनाउने बजेट एकल जातिवादीहरुको संकीर्ण सोचको पराकाष्ठा हो यो । नेपालका मै हुँ भनेर कुर्लने जातिवादी बाहुन पत्रकारहरु अनी मै हुँ भनेर कुर्लने बाहुन विद्धवानहरू किन चुप छन् । के पशुपतिलाई गरीव जनताको पैसा लुटेर ३५ करोड बजेट छुटाउनु उचित थियो? बोलन कथित बिद्धानहरू? बोलनहौ जातिवादी कथित मै हूँ भन्ने मिडीयाहरू? पशुपती कोषको करोडौ पैसा प्रकारन्तरले आफैमा निरर्थक रूपमा भारत पुरयाउने कार्य भई रहेको छ ।
जातिबादी पार्टीमा बसेर एमाले हाम्रो घर हो भनेर रमाउने त्यतिका धेरै आदिबासीहरूको बिरोध गर्ने बुद्धी र क्षमता छैन? नेपालको मै हुँ विद्धान भनेर मिडीयामा छाउने बाहुन बिद्धानहरू किन चुप बस्छन् !! कुन स्तरको हो तिम्रो बिद्धत्व? आवश्यकता भन्दा बढ़ी एकल धर्मको पक्षपोषण गरेर बस्ने कुन प्रकारको विद्धत्व हो ? के धर्मकै लागी बजेट विनिमय गर्नु थियो भने मेरो किरात धर्म त्यो देशमा थिएन? कति बजेट छुट्टायौ मेरो किरात धर्मको लागी? के हो समानता ? के हो न्याय? यति बुझ्दैनौ र बुझेरै पनि बिभेद गर्दैछौ भने जनताले तिम्रो ईज्वत गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरू तिमीलाई नाङ्गै पार्नुपर्ने हुन्छ । तिम्रो पशुपतिलाई ३५ कडोर पैसा छुट्याउँदै गर्दा यता किरातहरूको खुवालुङलाई नामेट पार्ने, धस्त पार्ने षड्यन्त्र र उद्देश्यले बजेट छुट्टाउने कार्य निन्दनीय छ बाहुन सरकार ।
वास्तबमा तिमीहरू सबैलाई यो भन्द स्तरको, उन्नति र प्रगती भएको देशमा बस्ने लायककै हैनौ तिमीहरू । देश बिकास गर्ने पैसा एउटा जातिको अभिमान बचाउन एउटा मन्दिर, एउटा सप्ताहा पुराणमा सिध्याए पछी । तिमीहरूले बस्नेनै त्यस्तै देशमा हो । तर दुःखको कुरा तिमीहरू जस्तो स्तरहीन जातिबादीहरूको कारणले करोडौँ गैर हिन्दुहरूले पनि दुःख पाए । जबसम्म यो देश हिन्दुधर्म अवलम्बिले चलाउँछ । यो देशको स्तर १०० बर्ष पछी पनि माथि उठ्दैन ।
नेपालको जनताले त दुःख पाउछन नै तर सँसारभरिका देशहरूलाई पनि मागेर यिनीहरूले वाक्क बनाएका छन् !! त्यसैले नेपालका प्रधान मन्त्री के पी ओली आउँदा बेलायतका एउटा पत्रिकाले एक शब्द पनि छापेन । अरूदेशको साधारण राजनितिक एपोईन्टमेन्ट लिएर बेलायत आउँदा पत्रिकाको हेडलाइन बन्छ । सँधै मागीखानेहरूको देशका प्रधानमन्त्री आउँदा बाध्य भएर रिशेप्सन गरेबाहेक एकाध जागीरे मिडीयाले जागिरखान अन्तरवार्ता लिएजस्तो गरेबाहेक, अरू कसैले वास्ता गरेन । एउटा मन्दिरलाई ३५ कडोर छुटाउने क्षमता भएकाहरूले किन अरूका देशलाई सधै भिख माग्छौ के पी ओली जी ? तिम्रो कुबुद्धि र कुकर्मका कारण जनतालाई रिणमा नडुबाउ । तिम्रो असल र खराब काम हामीले पनि देश बिदेशमा बसेर हेरिरहेका छौँ । दुख गर्ने हामी जनता अर्थहिन चैन गर्ने तिमी? देशमा राक्षेशहरूको बिगबिगी भएपछी मुलुक आखिर उजाड़ उन्मुख छ ।
« विवेकशील साझाका नेता उज्वल थापाको निधन (Previous News)
(Next News) उपत्यकाको निषेधाज्ञा : खाद्य पसल र पूर्वाधार निर्माण खुल्ने, सार्वजनिक गाडी नचल्ने »